Satria zanaka dia mpandova
"Ary raha zanaka, dia mpandova; eny, sady mpandova an' Andriamanitra no mpiray lova amin'i Kristy koa, raha miara-miaritra aminy isika mba hiara-manam-boninahitra aminy koa" - Rom 8:17.
Izay rehetra manao fanekena amin'i Kristy dia hatsangana ho zanak'Andriamanitra. Voadio amin'ny alalan'ny hery manavaon'ny Tenin'Andriamanitra izy ireo, ary misy anjely voatendry hikarakara azy ireo. Atao batisa amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina izy ireo. Mivoady izy ireo fa ho mambra mavitrika ao amin'ny fiangonan'Andriamanitra eto an-tany. Nantsoina mba ho faty ny amin'ny fahafinaretan'izao tontolo izao izy ireo; fa amin'ny fiteniny sy ny toe-panahiny araka an'Andriamanitra dia nantsoina hanana hery miasa mangina velona ho an'Andriamanitra izy ireo, amin'ny alalan'ny fanamasinan'ny Fanahy. "(...) Sady mpandova an'Andriamanitra no mpiray lova amin'i Kristy koa (...)" - akory ny fahamboniana sy fahamendrehan'izany toerana izany! Misaraka sy miavaka amin'izao tontolo izao, voaro amin'ny teti-dratsin'i Satana! Amin'ny alalan'ny voadin'ny batisa no ianianan'ireo mpanara-dia an'Andriamanitra fa hijoro hanohitra ny ratsy izy ireo. Hiasa amin'ny fahaizany rehetra ilay fahavalon'ny fanahy mba handotoana ny sain'izy ireo. Hiezaka izy hampiditra ny fombany ao amin'ny fanompoan'izy ireo ny Tompo. Kanefa misy antoka azy ireo raha manaiky ilay antso hoe: "(...) mahereza ao amin'ny Tompo sy amin'ny herin'ny faherezany. Tafio avokoa ny fiadian'Andriamanitra, mba hahazoanareo hifahatra amin'ny fanangolen'ny devoly". —Ms, 57, 1907
Fanomezam-boninahitra ny olona ny anaovana azy ho mpiara-miombona antoka ao amin'ny orinasan'Andriamanitra, sy ny anekena azy ho mpiara-miasa ao amin'ny sahan'asa lehibe indrindra izay naorin'Andriamanitra (...) Araka ny tendrin'Andriamanitra dia mpandova Azy ny Tompo Mpamonjy antsika, ary ireo izay miara-miasa Aminy eo amin'ny asa famonjem-panahy dia mpiara-mandova Aminy (...). Izay miditra ao amin'ny laharan'ireo manana ny voninahitra mavesatra maharitra mandrakizay no mpandresy. — L, 49, 1896
Inona moa no voninahitra lehibe kokoa azontsika antenaina mihoatra noho ny fiantsoana antsika hoe zanak'Andriamanitra? Inona no toerana ambony kokoa, ary Inona no lova tsara kokoa azontsika andrandraina mihoatra noho izay raisintsika amin'ny maha-mpandova an'Andriamanitra sy mpiray lova amin'i Kristy antsika? — YI, 08 Martsa 1892